Ukuhambelana kweTaurus kunye ne Scorpio: ♥ Le yenye yeDo Sexy Duo! - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Ukuhambelana kweTaurus kunye ne Scorpio: ♥ Le yenye yeDo Sexy Duo!
I-Taurus ne-Scorpio ziyahambelana kakhulu kwaye ubudlelwane bazo buya kuhlawuliswa kakhulu ngokwesondo. Nangona befumana enye ishushu, ingaba ubudlelwane babo buya kuhlala buhleli?
Ngaba sithi okanye kushushu apha ?! Umtsalane wemagnethi uhamba ngale duo kwaye kuthetha ukuba bayasokola ukugcina izandla zabo zibambene. Unxibelelwano lwabo lunamandla kakhulu, kokubini ngaphakathi nangaphandle kwegumbi lokulala kwaye esi sibini sidibene ngokugqibeleleyo xa kufikwa kuthando. Ukuba baqala ubudlelwane, bayokonwabela ukonwaba kwaye i-chemistry yabo iya kuthetha ukuba unxibelelwano luhamba phakathi kwabo. Fumanisa amanqaku okuhambelana eTaurus kunye ne Scorpio kwaye ufumanise ukuba bayasebenza ngothando.
'ITaurus neScorpio zinonxibelelwano olungakholelekiyo ngokwesondo.'
Yintoni inqaku lokuhambelana kweTaurus kunye ne Scorpio? Ngu 3/5
Ezi zimbini zahlukile, kodwa ziyahambelana. Njengabantu benyama, banokudlula iiyure kwigumbi lokulala, bephila ngeyona minqweno imbi kakhulu. Ulwalamano olusenyameni kakhulu, kodwa ngengqondo abavumi kwaye oku kunokuba yingxaki. Ubuntu beScorpio bunzima kakhulu kwiTaurus, ecinga ngokwenzeka ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo. IScorpio ayinakukhetha iTaurus, kwaye ukungabikho kwabo kwempindezelo kunokubangela ubundlobongela phakathi kwabo. Nangona kunjalo, ubomi bukaTaurus buthoba iScorpio ngomonde. I-Scorpio yemvelo ifundisa iTaurus ukuba isebenzise intuition ukucinga izinto.
Izizathu zokuba le duo isebenze
Umsindo ombi weScorpio unokuvusa icala lokuzikhusela likaTaurus kwaye kubangele uxinzelelo olunzulu kubudlelwane, Esi sisibini esingazinzanga kakhulu! I-Taurus liqabane eligqibeleleyo lokuzolisa iScorpio phantsi kwaye ibafundise indlela yokuzola kunye nokuba nomonde. Ewe baninzi abanokuzuza ngokuba kunye. Ubuntu obudlamkileyo beScorpio buya kufundisa iTaurus ukuba ibambe umzuzu kwaye iphile ngoku! Njengokuchasene ne-zodiac, ufana neemagnethi ezimbini kwaye enyanisweni, nitsalela omnye komnye ngaphandle kwentsingiselo.
Ukuba idrama yaziswa kubudlelwane, omabini amaqabane aya kuba noloyiko kwaye afune ukubaleka. Aba bemi bajonge kwimanyano ezinzileyo ngaphezu koko. Ngobushushu obunje, umbono wabo wehlabathi kunye nowesibini wahluke ngokupheleleyo, umngcipheko wokungaqondani nzulu ke ngoko. Ngaphezu kwakhe nabani na ongomnye, kuya kufuneka bafunde ukucinga ngaphambi kokuba bathethe.
- Funda nzulu malunga nokungena Iinyani ezili-15 malunga neTaurus -
Uhambelana neepesenti ezilikhulu kwaye uyahambelana baziqonde ngokupheleleyo iimfuno zomnye nomnye kwigumbi lokulala! Umnqweno wabo ngamanye amaxesha umda kubundlongondlongo. Ngesondo bahlangana kakuhle kangangokuba ubudlelwane babo bunokujika bube kukuthanda okanye nokuba likhoboka.
Funda uku baqonde omnye komnye kwinqanaba elinzulu! IScorpio akufuneki siyibethe iTaurus rhoqo emngciphekweni wokuvusa umsindo wayo kwaye kule meko, phakathi kwale miqondiso mibini, iipane ziyabhabha!
USusan Taylor ulungiselele lonke ulwazi oludingayo kubuntu beTaurus kwaye ukukhuthaza ukuba ubale uphawu lwakho olukhulayo ukuba awukayazi!
Fumanisa ukuba yintoni u Falcon; Iimpawu zomoya wezilwanyana zomoya
I-Horoscope yesini ngo-2021: Iintlantsi zokuThatheka ziya kuhamba
I-1111 ithetha ukuba doreen isidima
yintoni isilwanyana virgo
Umdlalo wothando we-aquarius kunye negemini
intsingiselo yokomoya yexhama
ukubhula ngenani 7 kunye no-7